Fetiraiza Sanganisa Fekitori | China Fertilizer Chisanganiso Vagadziri, Vatengesi
Iyo Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine ndiwo musanganiswa wekusanganisa uye unomutsa midziyo mumutsetse wekugadzira fetiraiza. Iyo ine simba rakasimba rinosimudzira, iro rinogona kugadzirisa zvinetswa senge kunamatira uye kusangana.
Izvi Disc Fertilizer chisanganiso Machine inowanzoshandiswa kusanganisa zvinhu pasina tsvimbo dambudziko nekushandisa polypropylene bhodhi lining uye isina simbi zvinhu, ine hunhu hwecompact dhizaini, nyore kushanda, yunifomu inomutsa, iri nyore kuburitsa uye kuendesa.
BB Fertilizer Chisanganiso Machine inoshandiswa kukurudzira zvizere uye kuenderera mberi kuburitsa mbishi zvigadzirwa mukugadzirwa kwekusanganisa fetiraiza. Iyo midziyo inoverengeka mukugadzirwa, otomatiki kusanganisa uye kurongedza, kunyangwe kusanganisa, uye ine simba kugona.